चिसो मौसममा ओठ फुट्ने समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? -
चिसो मौसममा ओठ फुट्ने समस्याको समाधान कसरी गर्ने ?
काठमाडौँ । जाडोको समय वा सुख्खा धुलो चल्ने मौसममा सबभन्दा बढी ओठ फुट्छ । बढी चिसो हुँदा ओठमा रहेको तैलीय पदार्थ निकाल्ने ग्रन्थिहरूले कम तेल निकाल्छन् र फुटाइ सुरु हुन्छ । समाधानको उपाय के छ
ओठ फुट्ने धेरैजसो व्यक्तिहरू बारम्बार जिब्रोले ओठ चाट्छन् । यसो गर्दा केही सन्चो भएजस्तो लाग्छ तर थुक सुकेपछि पहिलेको भन्दा झन् सुख्खा हुन्छ । बारम्बार ओठ चाटिरहँदा ओठको छाला वरिपरि कालो हुन जान्छ । विशेष गरी यो बालबालिकालाई देखापर्ने समस्या भए पनि कहिलेकाहीँ ठूला व्यक्तिहरूमा पनि देखापर्छ ।
Previous articleखाेप नलगाएकाहरूका लागि ”ओमिक्रोन” खतरनाक भाइरस
Next articleनमोबुद्धको एघारौं नगरसभा सुरु, संस्था दर्तासम्वन्धी विधेयक पेश
राति १२ बजेदेखि उपत्यकामा जोरबिजोर,कोरोनाको खोप कार्ड हरायो, के गर्ने ?
चितवनमा रहेका दुई सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले जाेखिम भत्ता नपाएकाे गुनासाे
बजारमा सिटामाेल अभाव, सरकार माैन